Gothic Tattoos - Dhizaini uye Zvinorehwa Nezviratidzo zvavo | Kunyora
Iko kutanga kweiyo gothic tattoos
ari gothic nyora Ivo zvakare vanomiririra Gothic tsika. Kunyangwe iwo makuru mairi ezviratidzo akavakirwa pane rakasviba dhizaini, hazviwanzo kugara zvakadaro. Rudzi urwu rwematatoo runotakura kukosha kukuru kumusana kwavo uye harungobatanidzwe nerima chete.
Manzwiro anokwakuka mune imwe neimwe yemifananidzo. Iyi inzira yekuratidza zvatakatakura mukati, asi ino nguva kuburikidza nemazhinji mamaki uye manhamba ayo anogona kuvhara akanyatsovanzika pfungwa. Kune izvi zvese, isu tinofanirwa kuratidza mukurumbira weizvi mhando yematatoo. Tsvaga iwo akanakisa magadzirirwo!
1 Gothic nyora, hwaro hwakakura hwaro
2 Gothic Tattoo Dhizaini
Gothic nyora, hwaro hwakakura hwaro
Sezvo isu tichinyatso kuziva, gothic tattoos haisi inomiririra kuratidzira. Uye zvakare, ivo havazombove vane zvematongerwo zviratidzo kana nzira dzekufunga nenzira iyi. MaGothic tattoos chikamu cheiyo gothic tsika nerunyararo. Ehezve, mune ino kesi, kana iwe ukaona mamwe magadzirirwo, iwe unogona kugara uchifunga zvakapesana. Zvakanaka kwete, ivo vari pachena nezve izvo zvavanoda uye vanozviratidza mune yega yega magadzirirwo. Ndosaka hwaro hwayo hwakavakirwa pane dzimwe pfungwa kana zvido uye hakuna imwe mberi.
Gothic Tattoo Dhizaini
Iwo magadzirirwo atinogona kuwana mukati meGothic tattoos akasiyana kwazvo. Pasina kupokana, zvinonzi imwe yeanonyanya kuitika ari michinjikwa kana dehenya pamwe nemampires. Ehezve, kunyangwe zvakadaro, pachave paine akawanda mazano anonyatsoenderana neiyi tsika.
ari nzvimbo dzakasviba Ivo vanowanzo kuve imwe yeanonyanya kudhirowa madhizaini mune aya mhando yetattoos. Pasina kupokana, iwo ndiwo makona atinogona kuwana muhupenyu hwedu. Dzimwe dzenzvimbo dzinogona kunge dziri nekuti dzinotiyeuchidza nezve mamwe mafirimu mafirimu kana kuti aripo muhupenyu chaihwo. Isu tese tinonzwa tichizivikanwa nenzvimbo dzakati, saka munyika yetattoos isu taisazove vashoma.
Sezvatakange tataura, dehenya ndidzo zvimwe zvezvikonzero zvikuru. Kunyangwe iwe usingafanire kuve goth kupfeka imwe. Nhasi kune mhando dzakasiyana dzemaitiro uyezve ezvatinazvo. Nzira yekumiririra rufu uyezve, kupfuura kwehupenyu.
Kana tisati tataura nezve nzvimbo, ikozvino isu takasiiwa nehunhu hunogona kuvakomberedza. Ose akasviba miti nemaruva matema ndiwo gothic nyora dhizaini chakanyanya kudiwa. Roses anogara akafanana nerunako uye kuravira kwakanaka. Muchiitiko ichi, havawanzofananidzira rufu. Isu tese tinogona kuvapa zvinoreva zvitsva.
Imwe yengano dzevamwari ndedzemampampu. Mumiriri uyo mune dzakawanda kesi une chirevo chepabonde, kunyanya kana iwo akagadzirwa nemagadzirirwo e vampire vakadzi. Ehezve, inowanzo kuve nezvakawanda zvine chekuita neGothic uye nekumiririrwa kwayo. Kupfuura chero chinhu nekuda kwemeso akapfava kana miromo mitsvuku.
Michinjiko Ivo ndeimwe yemamiririri makuru sekusvika kune gothic tattoos. Pasina mubvunzo, ndeimwe yemabhesiki makuru echitendero, asi sezvatakataura nemazvo, mune iyi nyaya imwe neimwe inogona kuwedzera zvinoreva. Dzese dzinogona kuve nemimwe medieval-mhando magumo ayo anozoonekwa zvakare mumatato eiyi dhizaini.
Vakadzi veVictorian ndevamwe ve zvimwe zvinokwezva mazano epasi regothic. Kutenda kune ake madhirezi uye zvishongedzo, fashoni yake inoisa maitiro pakati pevadi veGothic. Zvekuti vanga vasiri kuzosiiwa kumashure kana zvasvika kumatato. Mune ino kesi isu takasiiwa nechiso chemukadzi wevintage, kunyange hazvo akaremara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Body Art » Iko kutanga kweiyo gothic tattoos
Siamese katsi nyora
Zvinoreva tattoo nyowani yaLiam Payne zvakaratidzwa